किन पोलिन्छन् चेपाङका बालबालिका ? - Sudur Khabar
किन पोलिन्छन् चेपाङका बालबालिका ?
चितवन पुस २९ – चितवन इच्छाकामना गाउँपालिका–१ थाप्राङका श्याम चेपाङले छोरीको नाम खुइलीमाया राखे आगोले पोलेर कामप खुइलेका कारण १० वार्षीया ती बालिकालाई गाउँमा सबैले ‘खुइली’ नै भन्छन् । दुई वर्षको हुँदा उनलाई आगोले पोलेको हो । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।
उनको दुवै खुट्टाको पैतला डढेको छ । आगोको छेवैमा भएको छोरा पोलिँदा सँगै रहेकी आमा निदाएकीले थाहा पाइनन् । छोरो चिच्याएपछि विष्णुले तानेर जोगाए । ‘म अलि टाढा भएको भए कोइला बन्थ्यो होला’, उनले भने ।
यस्ता छन् नयाँ सरकार गठनका कठिनाइ
काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर के गर्दैछन् ?